Baro dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah si aad ugu aragto Vienna | Bezzia
Maxaa lagu arkaa magaalada Vienna
Susana Garcia | 26/05/2021 10:00 | nololeedka, safarka
Vienna waa magaalo qurux badan oo qurux badan, oo soo jiidasho iyo casriyeyn u leh dhammaan martida soo dhex marta. Caasimadda Austria waxay nagu qancisay dhismayaasha taariikhiga ah, geesaheeda iyo makhaayadaha. Hadaad jeceshahay dhamaan magaalooyinka yurub, hubaal kani kaagama tagi doono dan la'aan, maxaa yeelay wuxuu leeyahay soojiidasho hore oo lagu dhex daray taabashada cusub iyo farshaxanka ee lagu nuuxnuuxsaday dhamaan meelaheeda iyo geesaheeda.
La Magaalada Vienna waa goob mudan in la booqdo. Waxaan arki doonnaa waxa ay yihiin meelaha ugu xiisaha badan, laakiin sida magaalo kasta oo kale, waa inaad naftaada u ogolaataa inaad tagto oo aad booqato gees walba haddii ay suurta gal tahay, maadaama aan marwalba heli karno meelo la yaab leh. U ogolow naftaada in lagaa qaado soo jiidashada weyn ee Vienna safarkaaga xiga.
1 Qasriga Schönbrunn
2 Hofburg qasriga
3 Maktabadda Qaranka Austria
6 Beeraha magaalada
Este qasriga waxaa loo yaqaan 'Versailles of Vienna', mana ahan wax kayar muuqaalkiisa xarrago leh. Qasrigan waxaa la dhisay qarnigii XNUMX-aad oo ku yaal goob ay ku ugaarsadaan. Waqti kadib waxay noqoneysaa xilliga xagaaga ee qoyska boqortooyada ilaa dhamaadka boqortooyada bilowga qarnigii XNUMXaad. Meel sidoo kale ahayd meeshii uu ku yaallay boqoradii caanka ahayd ee Sissi. Booqashooyinka hagida ee qasriga waa la dalban karaa si aadan waxba uga maqnaan qolalkaaga, ku raaxee jardiinooyinkan gacmeed, oo tigidh si aad u aragto Matxafka Gawaarida Imperial ee ku dhegan qasriga.
Waxay ku taal bartamaha taariikhiga ah ee magaalada waxaan ka helnaa qasriyad kale oo ay tahay in la booqdo, Hofburg Palace. Waxay ahayd in ka badan lix qarni deggenaanshaha qoyska boqortooyada ee Habsburgs. Qasriga dhexdiisa waxaad ku booqan kartaa guryihii hore ee boqortooyada, matxafyada iyo goobaha cibaadada. Matxafka Sisi, oo loogu talagalay nolosha boqoradda caanka ah ama dahabka maxkamadda, ayaa si gaar ah u muuqda.
Maktabadda Qaranka Austria
Waxaa la dhisay qarnigii XNUMX-aad Waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah maktabadaha taariikhiga ah ee ugu quruxda badan adduunka, sidaa darteed haddii aad jeceshahay booska noocan oo kale ah ha moogaan Laybareeriga waxaan ku arki karnaa qaab dhismeedka qaab dhismeedka baroque, taallo hore, shiraac iyo dabcan buugag aad u fara badan.
Opera State Opera waa shirkada opera aduunka ugu caansan. The Vienna Opera House waxaa la furay 1869 sida a Dhismaha Renaissance, oo ay kujiraan shaqo ay wadaan Mozart. Sanadkii 1945 bam ayaa si xun u waxyeeleeyay dhismaha waxayna qaadatay sanado in dib loo furo. Maanta wali waxaan hor taaganahay astaan ​​dhab ah oo magaalada ah, dhisme taariikhi ah oo muhiimad weyn leh. Waxaad ku arki kartaa dhismaha gudihiisa sidoo kale waxaad qaadan kartaa safarro haga. Intaas waxaa sii dheer, waa suurtagal in lagu iibsado tikidhada rakhiis ah ee shaqooyinka, sidaas darteed waa fursad weyn.
Tani waa suuqa ugu caansan dhammaan Vienna waxaana la waday tan iyo qarnigii XNUMXaad. Waa suuq caadi ah oo aad ka heli karto dhammaan noocyada kala duwan ee meheradaha cuntada lagu iibiyo. Meesha ugu fiican ee lagu arko nolol maalmeedka dadka Vienna iyo iibsashada cuntada deegaanka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira aagag wax laga cuno oo leh maqaaxiyo iyo cooshado, taasoo ka dhigeysa meesha ugu habboon ee lagu istaago oo lagu tijaabiyo suxuunta caadiga ah.
El baarkinka magaalada, oo la furay qarnigii XNUMXaad, waa mid ka mid ah meelaha laga tago Vienna. Beerta ayaa leh qaab Ingiriis ah, oo taalo u leh Johan Strauss ama dhismaha Kursalon. Beertan oo qiyaastii ah 65.000 oo mitir murabac ayaan ku arki doonnaa dhammaan noocyada cagaarka ah iyo dhirta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Maxaa lagu arkaa magaalada Vienna
Timaha dhaawacmay? Ku soo celi talooyinkan
La seexashada lammaanaha ayaa faa'iido u leh caafimaadka maskaxda